House for Sale in Dagon Myothit (East) - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Houses for Sale in Dagon Myothit (East)
Township Dagon Myothit (East)
Ad Number S-10041156
Ad Number S-10040663
ဈေးတန် လုံးချင်း ရောင်းမည်
အိမ်၂လုံး ပါ လုံးချင်း အိမ်လေး အမြန်ရောင်း မည် တန် ရင် မြန...
09 799526025 /09 774962635/09 456273265
Ad Number S-10034302
ရွှေမြင့်မိုရ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် Close
Ad Number S-10044851
​​​​အရှေ့ဒဂုံ မြို့ နယ် ဗိုလ်စောနှောင်လမ်းမတန်း (40 x 60) (2ထပ် အမိုးစလပ်) လုံးချင်းတိုက်သစ်...
Ad Number S-10043886
Aung Htet Aung Real Estate Close
မိန်းလမ်းမကြီးတွေနဲ့ နီးတဲ့အပြင် Location ကောင်းတဲ့နေရာလေးက အသင့်နေရုံ2RC ဆောက်လုပ်နေဆဲ...
Ad Number S-10042102
အရှေ့ဒဂုံ ရပ်ကွက်သန့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း တိုက်အသစ် အမြန်ရောင်းမည်။
1,630 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10041705
အရှေ့ဒဂုံ 15 ရပ်ကွက် ၊ အနော်ရထာလမ်းမကြီးအနီး ပတ်ဝန်းကျင်သန့် တိုက်သစ်လေး ရောင်းမည်။
Ad Number S-10040222
Ad Number S-10038999
ရပ်ကွက်သန့်သန့်လေးထဲမှာ နေရာလေးကအဝင်အထွက်ရှယ်ကောင်းတဲ့ မြေကွက်အရောင်းလေးလာပြီရှင့်။
Ad Number S-10037875
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်9vip ရပ်ကွက် 1½ RC တိုက်သစ် အရောင်း။
1,280 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10037829